National Power News:: बागमती प्रदेशका कोरोनाबाट हालसम्म ४ हजार बढीको मृत्यु National Power News:: बागमती प्रदेशका कोरोनाबाट हालसम्म ४ हजार बढीको मृत्यु
काठमाण्डौ – बागमती प्रदेशमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट हालसम्म ४ हजार ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा प्रदेशका १३ जिल्लाका कुल संक्रमितको १ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ३९ जनाको मृत्यु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ५ जना पुरुष रहेका छन् भने ३ जना महिला रहेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौं र भक्तपुरमा २–२ जनाको मृत्यु भएको छ भने धादिङ, दोलखा, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा १–१ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुरुषोतम सेढाइँले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशमा २१ लाख ९२ हजार ४ सय ७४ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ३ लाख ७२ हजार ४ सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो कुल परीक्षणको १६ दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।बागमती प्रदेश रहेका कुल संक्रमित मध्ये करिव ९६ प्रतिशत संक्रमणमुक्त भएका छन् । प्रदेशका १३ जिल्लाका कुल ३ लाख ७२ हजार ४ सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा ३ लाख ५७ हजार ४ सय ६१ जनामा कोरोना संक्रमण निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा बागमती प्रदेशका ७ सय ७१ जनामा कोरोना संक्रमण निको भएको छ ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या ११ हजार नजिक यसैगरी बागमती प्रदेशमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ११ हजार नजिक रहेको छ । प्रदेशको काठमाडौं उपत्यका सहितका जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या १० हजार ९ सय ९७ जना रहेको छ । जसमध्ये होम आइसोलेशनमा ९ हजार ३ सय २२ जना रहेका छन् भने १ हजार ६ सय ७५ जना विभिन्न अस्पतालका आइसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयू र संस्थागत आइसोलेशनमा बसिरहेका छन् । प्रदेशका १३ जिल्लाको विभिन्न अस्पतालले संचालन गरेको आईसीयूमा ३ सय ८१ जना, एचडियूमा ७ सय ९ जना, भेन्टिलेटरमा ८६ जना, सामान्य उपचार कक्षमा २ सय १६ जनाको उपचार भइरहेको प्रवक्ता डा. सेढाइँले बताए । २ सय ३८ जना कोरोना संक्रमितहरु भने प्रदेशमा विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र संस्थाहरुले संचालन गरेको संस्थागत आइसोलेशनमा बसिरहेको उनले बताए ।